Xil Ka Qaadisii General Bashiir Maxaa Keenay? Miyaa Lagala Tashaday? Xil Cusub oo Loo Ballanqaaday | Shabakada Gabooyaha
Xil Ka Qaadisii General Bashiir Maxaa Keenay? Miyaa Lagala Tashaday? Xil Cusub oo Loo Ballanqaaday
General Bashiir Maxamed Jaamac ayaa waxaa si aad ah uga cadhooday qaar ka mid ah xubnaha siyaasiyiin ah iyo kuwo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo sheegay inaaney la dhacsaneyn xilka qaadista Janaraal Bashiir oo wax muuqda ka qabta xilkii uu hayay.
Janaral Bashiir ayaa wararku sheegayaan in Madaxweyne Farmaajo uu kala tashaday xilka ka qaadistiisa si ka duwan, siyaabihii xilka looga qaaday madaxdii kale ee xilka qaadista lagu lasameeyay, maadama uu xiriir fiican kala dhaxeeyo madaxweynaha.
Wararka hoose ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo doonayo inuu xil cusub u magacaabo Jeneraalka loona dhiibi doono, hay’ad cusub oo la doonayo in lagu dhaqan celiyo dhalinyarada ka soo diga rogta al-Shabaab.
Si kastaba, waxaan la ogeyn in madaxweyne Farmaajo uu la taliyaha ka dhigan doono la taliye amaba uu uu u dhiibi doono jaga cusub, amaba ay la tagtay siiftii horey u qaaddaay saaxiibadii xilka ku waayay magacaabistii cusbayd.